Ilay Andriamanitra telo izay iray - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny Andriamanitra telo izay iray
Araka ny fijoroana ho vavolombelona ao amin’ny Soratra Masina, Andriamanitra dia Andriamanitra ao amin’ny olona telo mandrakizay, mitovy nefa samy hafa, dia ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Izy no hany Andriamanitra marina, mandrakizay, tsy miova, mahery indrindra, mahalala ny zava-drehetra, misy ny toerana rehetra. Izy no nahary ny lanitra sy ny tany, mpiaro izao rehetra izao ary loharanon’ny famonjena ho an’ny olombelona. Na dia ambony aza Andriamanitra dia miasa mivantana sy manokana amin'ny olona. Andriamanitra dia fitiavana sy hatsaram-panahy tsy manam-petra. (Marka 12,29; 1. Timoty 1,17; Efesianina 4,6; Matio 28,19; 1. Johannes 4,8; 5,20; TITOSY 2,11; Jaona 16,27; 2. Korintiana 13,13; 1. Korintiana 8,4-6)
Tsy mandeha tsara io
Ny Ray dia Andriamanitra ary ny Zanaka dia Andriamanitra, fa iray ihany ny Andriamanitra. Tsy fianakaviana na komitin’ny zava-manan’Andriamanitra izany – tsy afaka miteny hoe: “Tsy misy tahaka Ahy” (Isaia 4.3,10; 44,6; 45,5). Andriamanitra dia Andriamanitra irery ihany - mihoatra noho ny olona iray, fa andriamanitra ihany. Tsy avy amin’ny fanompoan-tsampy na filozofia no nahazoan’ny Kristianina voalohany an’io hevitra io — karazana noteren’ny Soratra Masina hanao izany izy ireo.
Fa maninona no mandalina teolojia?
Aza miresaka amiko momba ny teolojia. Ampianaro ahy fotsiny ny Baiboly. » Ho an'ny kristiana salanisan'ny mahazatra, ny teolojia dia mety toa toa tsy misy fanantenana be pitsiny, mampikorontan-tsaina ary tsy mitombina tanteraka. Ny tsirairay dia afaka mamaky ny Baiboly. Koa nahoana isika no mila mifaly teolojiana amin'ny fehezanteny lava sy ny fomba fampiseho hafahafa?
Finoana izay mitady fahalalana
Ny teolojia dia nantsoina hoe "finoana mitady fatratra". Amin'ny teny hafa, amin'ny maha-kristiana antsika, dia matoky an'Andriamanitra isika, fa Andriamanitra kosa noforonintsika hanana faniriana hahatakatra hoe iza no itokisantsika ary ny antony itokisantsika azy. Eo no miditra ny teolojia. Ny teny hoe "teolojia" dia avy amin'ny fitambaran'ny teny grika roa, theos, izay midika hoe Andriamanitra, ary logia, izay midika hoe fahalalana na fandalinana - ny fandalinana an'Andriamanitra.
Ny teolojia, rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy, dia afaka manompo ny Fiangonana amin'ny alàlan'ny fiadiana hevitra diso na fampianarana diso. Izany dia satria ny ankamaroan'ny hadalàna dia avy amin'ny tsy fahalalana ny hoe Andriamanitra, avy amin'ny finoana tsy mifanaraka amin'ny fomba nanambaran'Andriamanitra ny tenany ao amin'ny Baiboly. Ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alàlan'ny fiangonana dia tsy maintsy miorina amin'ny fototry ny fanambaran'Andriamanitra ho an'ny tena.
Ny fahafantarana na fahalalana an Andriamanitra dia zavatra tsy takatry ny olombelona ny tenantsika. Ny hany fomba hahitantsika zavatra marina momba an'Andriamanitra dia ny mandre izay lazain'Andriamanitra momba ny tenany. Ny fomba manan-danja indrindra nofidin'Andriamanitra hanambara ny tenany amintsika dia amin'ny alàlan'ny Baiboly, fitambarana andinin-tsoratra izay natambatra nandritra ny taonjato maro, teo ambany fanaraha-mason'ny Fanahy Masina. Na dia ny fandinihana mafy ny Baiboly aza dia tsy afaka manome antsika ny fahalalana marina hoe iza Andriamanitra.
Mila mihoatra ny fandalinana isika - mila ny Fanahy Masina ahafahantsika ny saintsika hahatakatra izay ambaran'Andriamanitra momba ny tenany ao amin'ny Baiboly. Amin'ny farany, ny fahalalana marina an'Andriamanitra dia tsy avy amin'Andriamanitra fotsiny fa tsy amin'ny alalàn'ny fandalinana sy ny fisainana ary ny fanandramana.
Manana andraikitra tsy tapaka amin'ny Fiangonana ny Fiangonana mba hamerenana amin'ny laoniny ny zavatra inoany sy ny fanaony raha jerena ny fanambarana avy amin'Andriamanitra. Ny teolojia dia ezaka lalandava ao amin'ny vondrom-pinoana kristiana ho an'ny fahamarinana nefa mitady ny fahendrena avy amin'Andriamanitra sy hanaraka ny fitarihan'ny Fanahy Masina amin'ny fahamarinana rehetra. Mandra-pahatongan'ny fiverenan'i Kristy amim-boninahitra, ny Fiangonana dia tsy afaka hieritreritra fa nahatratra ny tanjony.
Io no antony tsy tokony hanolorana ny teolojika ho fanitsiana fotsiny ny fikao sy ny foto-pinoana ao amin'ny Fiangonana, fa ny dingana fandinihan-tena tsy misy farany. Rehefa tsy mijoro amin'ny fahazavan'Andriamanitra ny zava-miafin'Andriamanitra isika dia hahita ny tena fahalalana an'Andriamanitra.
Nantsoin’i Paoly hoe “Kristy ao anatinareo ny fanantenana ny voninahitra” (Kolosiana). 1,27), ilay zava-miafina fa sitrak’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Kristy ny “hampihavanana ny zavatra rehetra aminy, na etỳ an-tany, na any an-danitra, ka manao fihavanana amin’ny rany teo amin’ny hazo fijaliana” (Kolosiana). 1,20).
Ny fitoriana sy ny fanaon'ny Fiangonana Kristiana dia mitaky famakafakana sy fanamboarana tsara, indraindray fanavaozana lehibe kokoa, satria nitombo tamin'ny fahasoavana sy fahalalana an'i Jesosy Kristy Tompo.
Ny teny hoe mavitrika dia teny tsara hilazana izany ezaka tsy tapaka ataon 'ny fiangonana kristiana izany mba hijery ny tenany sy izao tontolo izao ho fahazavana aminny fanambaranAndriamanitra ho avy ary avelao ny Fanahy Masina hampifanaraka mifanaraka aminny maha-olona indray taratry sy manambara izay tena Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny teolojia izany toetra tsara izany mandritry ny tantaran'ny Fiangonana. Namerina namaky indray ny Soratra Masina ny apôstôly fony izy ireo nanambara an'i Jesosy ho Mesia.
Ny fihetsika vaovao ananan'Andriamanitra ny tenany ao amin'i Jesosy Kristy dia nanolotra ny Baiboly tamin'ny jiro vaovao, hazavana izay azon'ny Apostoly satria nosokafan'ny Fanahy Masina izy ireo. Tamin'ny taonjato fahefatra, i Athanasius, evekan'i Alexandria, dia nampiasa teny fanazavana ao amin'ireo fitenenana izay tsy ao amin'ny Baiboly hanampy ny Jentilisa hahafantatra ny dikan'ny fanambarana avy amin'ny Baiboly. Tamin'ny taonjato faha-16, i Johannes Calvin sy Martin Luther dia niady ho an'ny fanavaozana ny Fiangonana noho ny fangatahan'ny fahamarinana ara-Baiboly fa ny famonjena dia tsy avy amin'ny fahasoavana amin'ny alalàn'ny finoana an'i Jesosy Kristy ihany.
Tamin'ny taonjato faha-18, John McLeod Campbell nanandrana ny fomba tery tamin'ny Eglizy Ekosy
manitatra ny toetozan'ny fampihavanana nataon'i Jesosy [fanavotana] ho an'ny zanak'olombelona ary avy eo dia nariana noho ny ezaka nataony.
Amin'izao vanim-potoana maoderina izao, dia tsy nisy mahomby amin'ny fiantsoana ny fiangonana ho teolojika mavitrika mifototra amin'ny finoana mavitrika toa an'i Karl Barth, izay "nanome ny Baiboly hiverina an'i Eropa" taorian'ny teolojia protestanta liberaly saika nitelina ny fiangonana tamin'ny humanisme nanaiky ny Fahazavana sy namolavola ny teolojian'ny Fiangonana tany Alemana.
Isaky ny tsy mahare ny feon'Andriamanitra ny Fiangonana ary manolotra ny fiandohany sy ny fiheverany azy dia mihamalemy sy tsy mahomby. Manjary misy ifandraisany amin'ny mason'ireo izay miezaka hanatratra ny filazantsara izany. Toy izany koa amin'ny faritra rehetra amin'ny vatan'i Kristy rehefa noforonina tao anaty hevitra sy fomban-drazana nataony mialoha. Lasa kivy izy, mihemotra na mazoto, ny mifanohitra amin'ny mavitrika, ary lasa tsy mahomby amin'ny fitoriana ny filazantsara.
Rehefa mitranga izany dia manomboka miparitaka na manaparitaka ny fiangonana, mifampisaraka ny Kristianina ary mifankatia ny lalàn'i Jesosy. Avy eo dia lasa andian-teny fotsiny, mitory ary fanambarana izay eken'ny olona ihany ny fitoriana ny filazantsara. Ny hery ao ambadik'izany dia manolotra fanasitranana ho an'ny fanota manota dia manary ny vokatr'izany. Lasa fifandraisana ivelany sy tsy misy fiantraikany fotsiny ny fifandraisana ary tsy misy fifandraisana lalina sy firaisan-kina miaraka amin'i Jesôsy sy eo amin'ny tsirairay, izay misy ny tena fanasitranana, fandriampahalemana ary fifaliana. Ny fivavahana static dia sakana iray izay manakana ny mpino tsy ho tonga tena olona izay, araka ny fikasan'Andriamanitra, dia ao amin'i Jesosy Kristy.
Ny fotopampianarana momba ny fifidianana na ny lahatra mialoha indroa dia efa nampiavaka ny foto-pinoana na fampahafantarana tao amin'ny lovantsofina teolojika nohavaozina (i John Calvin no nanaloka ilay fomban-drazana). Ity fotopampianarana ity dia matetika no tsy takatra, voadiso hevitra ary nahatonga ny resabe sy fijaliana tsy misy farany. I Calvin tenany mihitsy no nitolona tamin'io fanontaniana io ary ny fampianarany momba an'io dia nohazavain'ny maro tamin'ireto teny ireto: "Hatramin'ny taloha dia efa voatendrin'Andriamanitra ho famonjena ary ny sasany ho fanamelohana."
Ity fandikana farany ny foto-pampianarana momba ny fifidianana ity matetika dia voalaza fa "hyper-Calvinist". Mampiroborobo ny fiheverana an'Andriamanitra ho toy ny mpanao jadona tsy mandefitra sy fahavalon'ny fahalalahana olombelona izany. Ny fomba fijery izany foto-pinoana izany no mahatonga izany afa-tsy vaovao mahafaly izay ambara amin'ny fanambaran'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fijoroana vavolombelona momba ny Baiboly dia mamaritra ny fahasoavana voafidin'Andriamanitra ho mahagaga, saingy tsy lozabe! Andriamanitra izay tia fahafahana dia manolotra ny fahasoavany malalaka ho an'izay te handray azy.
Mba hanitsiana ny hyper-Calvinism, ilay teolojiana malaza momba ny fanavaozana ao amin'ny fiangonana maoderina, Karl Barth, dia namerina ny foto-pinoana momba ny fifidianana fanavaozana amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny fandavana sy ny fifidianana an'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Boky Faha-II ao amin'ny Eglizy an'ny Eglizy an'ny Eglizy, dia naneho ny fampianaran'ny Baiboly manontolo ny fifidianana izy amin'ny fomba mifanaraka amin'ny drafitry ny fanambaran'ny tena manokana. Ny tenin'i Barth dia naneho tamim-pahamarinana fa ny fotopampianaran'ny fifidianana ao amin'ny kontinanta iray dia manana tanjona lehibe: manazava fa ny asan'Andriamanitra amin'ny famoronana, ny fampihavanana ary ny famonjena dia tanteraka tanteraka amin'ny fahasoavana maimaim-poana izay naseho tao amin'i Jesosy Kristy. Nanamafy izy fa Andriamanitra Trio, izay niaina tamim-pitiavana mandrakizay, te hampiditra ny hafa amin'ity fiarahana amin'ny alàlan'ny fahasoavana ity. Ny Mpamorona sy ny Mpanavotra dia maniry mafy ny hifandraisany amin'ny zavatra noforoniny. Ary ny fifandraisana dia manana endrika mavitrika, tsy static, tsy vongany ary tsy miova.
Tao anatin'ny foto-pinoany, izay namerenan'ny Barth ny foto-pampianarana momba ny fifidianana amin'ny kontekistika iray izay Mpamorona-Mpanavotra, dia nantsoiny hoe "fitambaran'ny filazantsara" izany. Tao amin'i Kristy, Andriamanitra dia nifidy ny zanak'olombelona rehetra ao anatin'ny fifanarahana iray mba handray anjara amin'ny fiainam-piarahamoniny amin'ny alàlan'ny fisafidianana an-tsitrapo sy am-paniriana ho Andriamanitra izay natao ho an'ny zanak'olombelona.
I Jesoa Kristy dia sady voafidy no nolavina ho antsika, ary ny fifidianana sy ny fandavana ny tsirairay dia tsy azony fa tena misy ao aminy. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ilay Zanak'Andriamanitra no voafidy ho antsika. Amin'ny maha-olom-boafidy, olom-boafidy, solony, mpisolo toerana azy, dia miaraka amin'ny fanamelohana ny fahafatesana (ny hazo fijaliana) eo amin'ny toerantsika ary ho an'ny fiainana mandrakizay (ny fitsanganana amin'ny maty) eo amin'ny toerantsika. Ity asa fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny Fahatongavana ho nofo ity dia tanteraka ho fanavotana ny zanak'olombelona lavo.
Tokony hiteny ary hanaiky ny eny amin'Andriamnitra ho antsika ao amin'i Kristy Jesosy isika ary manomboka miaina ao anatin'ny fifaliana sy ny fahazavan'ilay efa natokana ho antsika - firaisana, firaisana ary fandraisana anjara aminy amin'ny famoronana vaovao.
Amin'ny ampahany lehibe amin'ny fotopampianaran'ny fifidianana dia nanoratra i Barth:
«Satria ao anatin'ny firaisan'Andriamantitra miaraka amin'io olona io dia i Jesoa Kristy dia naneho ny fitiavany sy ny firaisankina amin'izy rehetra. Tao amin'ity iray ity no nandraisany ny ota sy ny fanamelohana ny olona rehetra ary noho izany dia nanafaka azy rehetra tamin'ny fitsarana izy ireo, tamin'ny alàlan'ny zo avo kokoa, izay tena nanjo azy ireo, hany ka izy no tena fampiononana ny olona rehetra. »
Niova teo amin'ny hazo fijaliana ny zava-drehetra. Ny voary rehetra, na fantany io na tsia, dia lasa ary havotana, miova sy hamerina ao amin'i Jesosy Kristy. Ao anatin'izany isika dia lasa fahariana vaovao.
Thomas F. Torrance, mpianatra ambony sy mpandika teny amin'i Karl Barth, no mpanatontosa rehefa navadika tamin'ny teny anglisy ny dogmatics an'ny fiangonana. Nino i Torrrance fa ny Tontolo II dia iray amin'ireo asa teolojika tsara indrindra nosoratan'ny mpanoratra. Nanaiky izy tamin'i Barth fa ny olombelona rehetra dia navotana ary voavonjy ao amin'i Kristy. Ao amin'ny bokiny The Mediation of Christ, Profesorista Torrance dia manambara ny fanambarana ara-Baiboly amin'ny fomba iray fa i Jesosy, tamin'ny alàny ny fiainany nisolo tena, ny fahafatesany ary ny nitsanganany tamin'ny maty, dia tsy ilay fampihavanana manavotra antsika ihany, fa ihany koa ho valiny tonga lafatra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra.
Nesorin'i Jesosy ny fahotantsika sy ny fitsarana antsika, nalainy ny ota, ny fahafatesana ary ny ratsy mba hanavotana ny voary amin'ny ambaratonga rehetra ary hanova ny zavatra rehetra nijoro ho fanoherana antsika ho zavaboary vaovao. Nafahana tamin'ny toetrantsika maloto sy nikomy isika mba hanana fifandraisana anatiny sy Ilay manamarina sy manamasina antsika.
Mbola nitohy i Torrance, nanambara fa "ilay tsy mandray ilay tsy sitrana". Izay tsy nalain'i Kristy tamin'ny tenany dia tsy voavonjy. Nentin'i Jesosy tao an-tsaintsika ny saintsika, lasa lasa mihavana amin'Andriamanitra isika. Rehefa nanao izany izy dia nanadio, nanasitrana ary nanamasina ny olombelona mpanota ao anatin'ny halalin'ny maha-izy azy amin'ny alàlan'ny fihetsika feno fitiavana azy ho tonga olombelona ho antsika.
Raha tokony hanota tahaka ny olon-drehetra kosa i Jesosy dia nanameloka ny ota tao amin'ny nofontsika tamin'ny alàlan'ny fiainany fahamasinana tanteraka ao amin'ny nofontsika, ary tamin'ny alàlan'ny fankatoavany dia nanova ny zanak'olombelona feno fankahalana sy tsy mpankatò isika ho fifandraisana tena feno fitiavana sy fitiavana.
Tamin'ny Zanaka dia ny fanekena dia nanaiky ny maha-olombelona antsika Andriamanitra ka lasa nanova ny toetrantsika. Nanavotra sy nanao fihavanana tamintsika Izy. Amin'ny alàlan'ny fanaovana ny toetrantsika mpanota sy azy ho fanasitranana azy dia lasa mpanelanelana amin'Andriamanitra sy olombelona maty i Jesosy Kristy.
Ny safidintsika ao amin'ny Lehilahy iray dia Jesosy Kristy dia manatanteraka ny tanjon'Andriamanitra amin'ny famoronana sy mamaritra an Andriamanitra ho ilay Andriamanitra tia ny fahafahana. Nanazava i Torrance fa "fahasoavana rehetra" dia tsy midika hoe "tsinontsinona ny zanak'olombelona" fa ny fahasoavana rehetra dia midika fa anjaran'ny olombelona rehetra. Midika izany fa tsy afaka mitazona ny tenan'ny tenantsika iray akory isika.
Amin'ny alàlan'ny fahasoavana amin'ny alàlan'ny finoana dia mizara amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny famoronana amin'ny fomba izay tsy mbola nisy taloha isika. Midika izany fa tiantsika ny hafa tahaka ny nitiavan'Andriamanitra antsika satria ao amintsika amin'ny fahasoavana i Kristy ary ao aminy isika. Mety hitranga ihany izany amin'ny fahagagana fahariana vaovao. Ny fanambarana avy amin'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona dia avy amin'ny Ray amin'ny alalàn'ny Zanaka ao amin'ny Fanahy Masina, ary ny olombelona voavotra ankehitriny dia mamaly ny Ray amin'ny alàlan'ny finoana ny Fanahy amin'ny alàlan'ny Zanaka. Nantsoina ho fahamasinana ao amin'i Kristy isika. Ao anatin'izany isika dia mankafy ny fahalalahana amin'ny ota, ny fahafatesana, ny ratsy, ny filàna ary ny fitsarana mijoro manohitra antsika. Averinay ny fitiavan'Andriamanitra antsika amin'ny fankasitrahana, ny fanompoana ary ny fanompoana ao amin'ny vondrom-pinoana. Amin'izay rehetra manasitrana sy famonjena ho antsika, dia i Jesoa Kristy dia tafiditra ao amin'ny fanovana antsika tsirairay sy hahatonga antsika olombelona - izany hoe mahatonga antsika ho olona tena ao aminy. Amin'ireo fifandraisantsika rehetra aminy, dia ataontsika olombelona tena izy amin'ny valin-tenantsika manokana momba ny finoana. Ity dia amin'ny alàlan'ny herin'ny famoronan'ny Fanahy Masina ao anatintsika rehefa mampiray antsika amin'ny maha-olombelona tonga lafatra an'i Jesoa Kristy Tompo izy.
Ny fahasoavana rehetra dia tena midika fa mandray anjara avokoa ny zanak'olombelona rehetra. Ny fahasoavan i Jesosy Kristy izay nohomboana sy nitsangana tamin'ny maty dia tsy mampihena ny maha-olombelona azy hamonjy azy. Ny fahasoavany tsy takatry ny saina dia manazava izay rehetra ataontsika sy ataontsika. Na eo amin'ny fibebahantsika sy ny finoantsika, tsy afaka miantehitra amin'ny valin-tenantsika manokana isika fa miankina amin'ny valiny nomen'i Kristy sy ho antsika avy amin'ny Ray! Amin'ny maha-olombelona azy, Jesosy dia tonga mpanohana antsika amin'ny zavatra rehetra, ao ny finoana, ny fiovam-po, ny fanompoana, ny fankalazana ny sakramenta ary ny fitoriana ny filazantsara.
Mampalahelo fa tamin'ny ankapobeny dia tsy noraharahain'i Karl Barth tamin'ny alalàn'ny evanjelika amerikana ny filazalazana azy, ary i Thomas Torrance kosa noheverina matetika fa sarotra takarina. Fa ny tsy fankasitrahana ny maha-teolojika ny teolojia, izay nambara tamin'ny fanavaozana an'i Barth ny foto-pinoana momba ny fifidianana, dia nahatonga ny evanjelistra maro ary na ny Kristiana voaforona aza mbola voafandrika noho ny sahirana hahatakatra hoe aiza Andriamanitra no mampiavaka ny fitondran'olombelona. ka mifindra ho any amin'ny famonjena.
Ny fotokevitra lehibe fanavaozana ny fanavaozana mitohy dia tokony hanafaka antsika amin'ny tontolon'ny fahitana taloha sy ny teolojia mifototra amin'ny fitondran-tena izay manakana ny fitomboana, mampiroborobo ny fihenjananana ary manakana ny fiaraha-miasa eorika amin'ny vatan'i Kristy. Saingy ny fiangonana ankehitriny ve matetika no manaisotra ny fifaliana famonjena, raha mitazona «ady totohondry» miaraka amin'ny endriny ara-dalàna samihafa? Noho io antony io, ny Fiangonana dia matetika naseho ho toy ny lalam-panahin-jaza sy fitsikerana, fa tsy fanekena fahasoavana.
Isika rehetra dia manana teolojia - fomba fisainana sy fahalalana an Andriamanitra - fantatsika izany na tsia. Ny teolojika dia misy fiantraikany eo amin'ny fomba fisainantsika sy ny fahatakarantsika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famonjena.
Raha mailo ny teolojia ary mifototra amin'ny fifandraisana, dia hisokatra amin'ny tenin'ny famonjena izay misy antsika Andriamanitra, izay omeny antsika amin'ny fahasoavana irery ihany amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy.
Amin'ny lafiny iray, raha toa ny statistika teôlôjia, dia mankany amin'ny antokom-pinoana ara-dalàna isika
Famoronana ara-panahy sy ara-panahy.
Raha tokony hahalala an'i Jesosy amin'ny fomba mavitrika sy tena misy mamofona ny fifandraisantsika rehetra amin'ny fangorahana, faharetana, hatsaram-panahy ary ny fandriampahalemana isika dia hiaina fanahy, fialana tsiny ary fanamelohana avy amin'ireo izay tsy mahavita ny fenitra voafaritry ny fahadiovam-pitondrantena. ,
Famoronana vaovao amin'ny fahafahana
Ny teolojia dia mitondra fiovana. Ny fomba ahaizantsika an’Andriamanitra dia misy ny fahatakarantsika ny famonjena sy ny fomba hiainantsika fiainana kristiana. Andriamanitra dia tsy gadra ao amin'ny hevitra tsy miangatra, araka ny fiheveran'ny zanak'olombelona izay tokony hatao na tokony ho izy.
Ny olombelona dia tsy mahavita mieritreritra ny momba ny tena Andriamanitra sy ny tokony ho izy. Andriamanitra dia milaza amintsika hoe iza izy ary iza no toetrany, ary malalaka izy raha ny marina ho tiany, ary izy dia naneho ny tenany amintsika tao amin'i Jesosy Kristy ho Andriamanitra, izay tia antsika, izay momba antsika, ary iza no nanapa-kevitra ny hanao ny adin'olombelona - ao anatin'izany ny anao sy ny ahy - ny azy.
Ao amin'i Jesosy Kristy dia afaka amin'ny fisainantsika mpanota isika, avy amin'ny fireharehana sy ny famoizam-po ary ny nohodidin'ny fahasoavana mba hahatsapantsika ny fiadanan'i Shalom'n'Andriamanitra ao amin'ny vondrom-piarahamoniny feno fitiavana.
Terry Akers sy Michael Feazell